သင်မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ဥတုရာသီအချိန်က ပြောပြပေးမယ့် သင့်အကြောင်း
Shutterstock/ Memo Angeles & Colorfuel Studio & Lyudmyla Kharlamova
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရာသီဥတု ၃ မျိုးရှိပါတယ်။ နွေရာသီ ၊ မိုးရာသီ နဲ့ ဆောင်းရာသီပါ။ မင်မင်ကတော့ မိုးရာသီဖြစ်တဲ့ စက်တင်ဘာမှာမွေးခဲ့တာပါ။ မိုးရာသီမှာမွေးတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း မင်မင်ကတော့ မိုးရာသီကိုချစ်မနေခဲ့ပါဘူး။ ပရိသတ်ကြီးကရော ဘယ်ရာသီမှာမွေးခဲ့တာလဲ? ဒီနေ့မှာတော့ ပရိသတ်ကြီးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ရာသီကတစ်ဆင့် ပရိသတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကို ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ကိုယ်မွေးခဲ့တဲ့ရာသီကတစ်ဆင့် ကိုယ့်အကြောင်းကိုပြန်လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်….
Shutterstock/ Lyudmyla Kharlamova
ဖေဖော်ဝါရီ ၊ မတ် ၊ ဧပြီ နဲ့ မေလတွေက နွေရာသီလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဒီလတွေမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့သူတွေက နွေရာသီဖွားတွေပေါ့။ သင်ဟာ နွေရာသီမှာမွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းမြင်စိတ်တွေများတဲ့ လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘဝမှာ ဘယ်လိုပဲ ဒုက္ခတွေ ၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါစေ တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် ကံတရားက သင့်ကိုမျက်နှာသာပေးပြီး တစ်နေ့နေ့ကျရင် ကံကောင်းမှုတွေရလာမယ်လို့ ယုံကြည်ထားသူတစ်ဦးပါ။ ဒါ့အပြင် သင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်ရှိပြီး ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရင် ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲ ရင်ဆိုင်ရပါစေ ဇွဲမလျော့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်တက်ကြပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က သင်ဟာတက်တက်ကြွကြွနေတက်ပြီး ဉာဏ်အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ကစိတ်အပြောင်းအလဲမြန်တတ်ပါတယ်။ သင့်ကိုအကြံပေးချင်တာကတော့ ဘဝကိုအကောင်းဘက်ကပဲမြင်ပြီး သူတစ်ပါးကိုလည်း အမြဲကူညီတတ်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ သင့်ရဲ့အကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်လေးကို ဆထက်တပိုးပိုများအောင်လုပ်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတိုင်း “ ဖယောင်းတိုင်လေးတစ်တိုင်က အခြားဖယောင်းတိုင်တွေကို မီးညှိပေးလိုက်ရုံနဲ့ သူ့ရဲ့သက်တမ်းပိုတိုမသွားပါဘူး။ ဝေမျှခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်မူကိုရယူပါ” ဆိုတဲ့အတိုင်း သူတစ်ပါးကိုကူညီဝေမျှရင်း ပျော်ရွှင်မူတွေ ရယူပါ။
ဇွန် ၊ ဇူလိုင် ၊ သြဂုတ် နဲ့ စက်တင်ဘာလတွေကို မိုးရာသီလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဒီလတွေမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့သူတွေက မိုးရာသီဖွားတွေပေါ့။ သင်ဟာ မိုးရာသီမှာမွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူနဲ့မှရောရောထွေးထွေးနေရတာကိုမကြိုက်ပဲ တစ်ယောက်ထဲ သီးသန့်နေရတာကိုကြိုက်တဲ့လူမျိုးပါ။ များသောအားဖြင့် သင်ဟာ သင့်အချိန်တွေကို လူတွေကိုအချိန်ပေးပြီး ကုန်ဆုံးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ စာဖတ်ခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း စတဲ့ တစ်ယောက်ထဲ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့လုပ်ရတာမျိုးနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်လေ့ရှိပါတယ်။ သင်ဟာ ကိုယ်နှုတ်အမူအရာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းနှိမ်ချတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်ဟာ စိတ်ကူးအရမ်းယဉ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ သင့်စိတ်ကူးတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ဘယ်အရာကိုမဆို သေချာစီစစ်လေ့လာပြင်ဆင်ပြီး လုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီရာသီဖွားတွေဟာ အလုပ်လုပ်ရင်လည်း အသင်းအဖွဲ့နဲ့လုပ်ဆောင်ရတာမျိုးကို မနှစ်သက်ပဲ ကိုယ့်ဘာသာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ အာရုံစူးစိုက်ပြီး အလုပ်တွေကို အကောင်းဆုံးရလဒ် ရအောင်ဖန်တီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စကားပြောရတာထက် စာရေးရတာမျိုးကို ပိုပြီးနှစ်သက်ကြပါတယ်။ သင်ဟာ အေးအေးဆေးဆေးနေတက်ပေမယ့် အန္တရာယ် အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်လာရင်တော့ ဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အကောင်းဆုံးသင်တက်နိုင်သလောက် လုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်။ သင့်ကိုအကြံပေးချင်တာကတော့ လူတွေကိုအရမ်းရှောင်ဖယ်နေတာမျိုးမလုပ်ပဲ အလိုက်သင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြောဆိုစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကို ချက်ချင်းကြီးပြောင်းလဲလိုက်ဖို့ မလွယ်ပေမယ့်လည်း ဖြည်းဖြည်းချင်း သင်ယူလေ့လာရင်း ပြောင်းလဲရင် အဆင်ပြေလာမှာပါ။ လူဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲနေဖို့ လွယ်ကူတဲ့အရာမှ မဟုတ်ဘူးလေ။
Shutterstock/ Colorfuel Studio
အောက်တိုဘာ ၊ နိုဝင်ဘာ ၊ ဒီဇင်ဘာနဲ့ ဇန်နဝါရီလတွေကို ဆောင်းရာသီလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဒီလတွေမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့သူတွေက ဆောင်းရာသီဖွားတွေပေါ့။ သင်ဟာ ဆောင်းရာသီမှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ဉာဏ်ကောင်းပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့လူမျိုးတွေပါ။ ဒါ့အပြင် ရိုးသားဖြောင့်မက်ပြီး အကောင်းမြင်စိတ်များတဲ့အပြင် အလွန်သစ္စာရှိ ပါတယ်။ ဘယ်အရာကိုမဆို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့စည်းစနစ်တကျလည်း လုပ်ဆောင်တတ်တဲ့အတွက် တစ်ခါတစ်ရံ အခက်တွေနဲ့ကြုံရတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းကို သင်တက်နိုင်သလောက် ကူညီဖေးမတက်ပြီး သင်သိထား၊ တက်ထားတဲ့ဗဟုသုတတွေနဲ့ ပညာတွေကိုလည်း ဆရာစားမချန်ပဲ မျှဝေပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီရာသီဖွားတွေဟာ ဘုရားတရား အလွန်ရိုသေ ကိုင်းရှိုင်းတဲ့သူတွေလို့ ဆိုရပါ့မယ်။ လူတစ်ချို့က သင့်ကိုမာနကြီးတယ်လို့ ထင်တက်ကြပါတယ်။ အမှန်ကတော့ သင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မူတွေပြင်းထန်နေပြီး ခေါင်းမာလွန်းတဲ့အတွက် ဒီလိုအထင်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာချတက်ပြီး မလျော့တဲ့ဇွဲတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်တက်တဲ့အတွက်လည်း အောင်မြင်မူတွေရတတ်ပါတယ်။ လူတစ်ချို့က အောင်မြင်သွားရင် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘဝမေ့သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ကတော့ အဲလိုဘဝမေ့တာမျိုးမရှိပဲ အမြဲသင်ယူလေ့လာ ဆည်းပူးနေတတ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်လူတွေက မျှော်ကိုးပြီးရယူလိုစိတ်တွေပြင်းထန်ပေမယ့် သင်ကတော့ ဘယ်အရာကိုမှ ရယူလိုစိတ်မရှိပဲ လူတိုင်းကို နားလည်ပေးပြီး စေတနာအပြည့်နဲ့ ကူညီဖေးမတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ လူတစ်ချို့ရဲ့အမှားတွေကို စေတနာနဲ့ ထောက်ပြပြောဆိုမိတဲ့အတွက်လည်း လူမုန်းခံရတက်ပါတယ်။ ရိုးသားဖြောင့်မက်ပြီး သူတစ်ပါးကိုနားလည်ပေးတဲ့သင်ဟာ ကံကောင်းမူတွေရရှိတတ်ပါတယ်။